Zava-dehibe ny fiomanana hanao asa fitoriana. Ny asa fitoriana filazantsara dia asa atao an-tsitrapo hanompoana an’ Andriamanitra sy ny zanak’ olombelona. Amin’ ny alalan’ ny vola natokan’ ireo misiônera manokana no hanohanan’ izy ireo an’ io tombontsoa manokana io. Afaka manampy ihany koa ireo ray aman-dreny, sy ireo fianakaviana, sy ireo namana ary ireo izay manolotra fanomezana ho ao amin’ ny Kitapom-bola Foibe ho an’ ny Asa Fitoriana. Ireo misiônera rehetra, na antitra na tanora, dia manompo miaraka amin’ ny fanantenana iray ihany, dia ny hanaovana izay hahatsara kokoa ny fiainan�